DHAGEYSO: Kiiska Dilkii Dhega juun Oo Meelo Culus Lugaha la galay – XAMAR POST
Iyadoo Askar iyo Saraakiil Ciidan loo xiray Dilkii Gudoomiyihii Degmada Hodan Marxuum C/xakiin Ciise Dhega juun ayaa shalay Guddiga Baaritaankaasi loo xil saaray waxay gudbiyeen Natiijada gal baaristooda iyo wixii kasoo baxay.
Muuqaalo ay duubeen Kaamirooyinka Qarsoon iyo Xogo kale oo ay heleen Guddigaan ayey La wadaageen Xeer ilaalinta Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida.
Axada maanta ah ayaa la filayaa in natiijada Baaritaankaasi lasoo bandhigo iyadoo xeer ilaalinta ay howsha la wareegtay.
General Cabdullaahi Buulle Kameey oo ah Xeer ilaaliyaha Guud ee Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ayaa usheegay Warbaahinta Dawlada in kiiska Dilkii C/xakiin dhega juun uu ahaa mid si ulakac ah loo fuliyey.
Waxa uu tilmaamay in Maanta la guda galayo dacwada kiiskaan oo ay Xeer ilaalinta gacanta ku heyso,wixii go’aana ahna dib laga soo gudbin doono.
C/xakiin Ciise Dhega juun allaha Unaxariistee oo ahaa Gudoomiyihii Degmada Hodan ayaa xilli Habeen ah Gaari uu la socday waxa lagu rasaaseeyey meel ku dhaw Isgoyska Howlwadaag 20-kii Janaayo Sanadkaan 2021-ka ayey aheyd,dhaawac soo gaaray ayuuna udhintay Dhega juun.